UCAPTAIN MARVEL 2 WAMVA NJE [UHLAZIYO], IITHIYORI, UBUGCISA, ISIQENDU, IITRAILER, SINAZO ZONKE IINKCUKACHA EZINYE KUWE - IIMUVI
Umdlalo bhanyabhanya wokuqala we-Marvel Cinematic Universe wokuqala wababhinqileyo uKapteni Marvel ufumana ukulandelelana. Ukusukela ukuba imovie ikhutshwe kwangoko kwi-2019,
UMarvel Cinematic Universe wabasetyhini bokuqala ababonisa imovie uKapteni Marvel ufumana enye inkqubela.
Ukusukela ukuba imovie ikhutshwe kwangoko kwi-2019, kungathatha ixesha ukuya kwi-Nkulumbuso. UCaptain Marvel, ekhokelwa nguRyan Fleck kunye no-Anna Boden, wakhonza njengebali lemvelaphi kaCarol Danvers njengoko wayezama ukumisa uhlaselo lweSkrull emhlabeni. Umboniso bhanyabhanya ukwabonisa uNick Fury oselula odibana neDanvers ukumisa olo hlaselo.
Amagama aphezulu eqela le-whatsapp
Zininzi iindlela bhanyabhanya olandelayo weCaptain Marvel anokuhamba ngayo. Ingaphonononga ubomi bukaCarol emva kokuba ebhabha emhlabeni ekhangela ikhaya elitsha leSkrulls. Enye imeko enokwenzeka kukulwa kwakhe neKree kunye neYon-Rogg. Banokuphonononga okwenzekayo emva kweziganeko zeAvengers Endgame.
Kuba zonke iimovie zeMarvel zinokulandelelana, enye ifilimu ye- UCaptain Marvel iqinisekisiwe. Ukumangaliswa ekugqibeleni kuqinisekisile uKapteni Marvel 2 eSan Diego Comic-Con 2019. Ewe kunjalo, ifilimu ayizukuba yinxalenye yesiGaba se-4 seMarvel Cinematic Universe; Ngokuqinisekileyo kumgca oza kukhutshwa.
Uninzi lweemovie zeMarvel zinesithuba seminyaka emithathu phakathi kwazo. Uninzi lwamaphulo okwangoku aphuhliswayo nguMarvel. Ngenxa yoko, abalandeli mhlawumbi ngekhe ubone uKapteni Marvel 2 ubuncinci kude kube ngu-2022.
Masithi ukuba uKapteni Marvel wenzeka emva kwexesha elininzi kwixesha elizayo, sinethemba lokubona uMonica Rambeau. Uyintombi kaMaria Rambeau, umhlobo osenyongweni kaCarol, nakwimidlalo yamahlaya, uMonica ufumana amandla amakhulu kwaye ligorha elibizwa ngokuba yi-Spectrum. Sele eqinisekisiwe ukuba uyinxalenye yomboniso weWandaVision. Kufuneka kuqatshelwe ukuba imovie ijolise kakhulu kuphuhliso lomlinganiswa wakhe.
umzingeli umzingeli iziqendu ezitsha
Unxibelelwano noNks uMarvel
Kwabhengezwa kwi-D23 Expo ukuba uNks uMarvel uza kujoyina i-MCU. Unksz Marvel, aka Kamala Khan, uzakube efumana umboniso wakhe kwindawo yeDisney +. Kwiimidlalo ezihlekisayo, uNks uMarvel unxulumene noCaptain Marvel, kwaye ngekhe kube kukuqagela okungacacanga ukuba uCarol naye angavela kulo mboniso.
UCaptain Marvel ufumene impendulo entle evela kubalandeli, ke iMCU icwangcisa enye imovie kaCaptain Marvel. Ikamva eliqaqambileyo kumlinganiswa; Kungekudala, sinokubona iindaba ezimnandi.
Iza kuba yintoni inkqubela phambili?
U-Brie Larson uza kubuya njengoCarol Danvers kwaye abone ukuxabiseka kobuhlobo ngabalandeli, kwaye kungothusa ukuba asiboni uLashana Lynch ebuya njengoMaria Rambeau.
Okwangoku, masilinde i-trailer ye-movie ukuba iphume. Emva koko kuya kuba lula ukufumanisa ulwazi ngale bhanyabhanya izayo.
thanda ixesha lokuphila 3
Umntu wosapho olona hlobo luphambili lweziqendu
Nkosikazi emangalisayo. maisel ixesha 4 umhla wokukhutshwa
mangaphi amaxesha okuhamba abafileyo bakwi-Netflix
ukulungele ukuthanda ixesha lokuphosa 1